Alahady 04 Aogositra 2019. – FJKM
Alahady 04 Aogositra 2019.
Tsy mandeha ho azy ny fifampitondrana eo anivon’ny fiaraha-monim-piangonana. Misy ny fifandeferana tsy maintsy apetraka . Itokiana anefa ny Tompo fa mahay mampijoro ny mpino amin’izay mety ho fahalemeny .
Ijoroana eo anatrehan’ny Tompo ny fandresen-dahatra
Mety manana ny fahalemeny izay ijoroan’ny tena ny amin’izay fomba ifandraisana amin’ Andriamanitra ny mpino . Tsy natao hifampitsara amin’izany anefa izy. Ny zava-dehibe dia ny fijoroana amin’izay inoana. Raha tahiny ka fahalavoana izany , dia Izy Tompo irery ihany no mahay mampijoro ( and4 b ) .
An’i Kristy ny amintsika rehetra
Ny fiantsorohan’i Kristy ny momba antsika tamin’ny fahatongavany ho nofo na tao amin’ny fahavelomanany izany na tao amin’ny fahafatesany dia voahaisotra tsy ho tompon’ny tenantsika intsony isika . Efa an’i Kristy ny amintsika rehetra (and7-9) .
Noho izany , ny fahafahan’ny mpino ao amin’iKristy amin’ny fitondrantena rehetra dia tsy natao hitsarana na hanafitohinana ny hafa , fa ny hahatonga fiadanana sy fahamarinana ho azy .
Alahady 31 Mey 2020.
Sabotsy 30 Mey 2020.
Zoma 29 Mey 2020.